Online Saptarangi – Page 2
November 11, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on रियलमा आमा बन्दै रक्षा, जिग्रीले गरे खुलासा [भिडियो])
हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘भद्रागोल’बाट चर्चामा आएकी रक्षा श्रेष्ठ बास्ताविक जीवनमा नै आमा बन्न लागेको खबर बाहिरिएको छ । उनि गर्भवती भएको कारण नै उनी सहभागी भएको रियालिटी शो डान्सिङ वीथ द स्टारबाट बाहिरिएको बताइएको छ । हालै एक युट्युव च्यानलसँको कुराकानीमा भद्रगोल टिमले यसबारे खुलासा गरेको हो । गर्भवती भएका कारण उनी अब छिट्टै पुनः प्रशारण […]
November 11, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर महिला विना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार हुन्छ
महिला र पुरुष एकै रथका दुई पाग्रा हुन । एक अर्का बिनाको जिन्दगी पनि चल्दैन पनि । पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट । समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद पनि सारा […]
काठमाडौँ । सामान्यतयाः जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ओठ फुट्ने समस्या पनि शुरु हुन्छ ।जाडोको समयमा हावा सुख्खा हुने र यसको स्पर्श छालामा पर्दा छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ । जाडोको समयमा सुख्खा हावा बाहेक अन्य कारण पनि ओठ फुट्ने समस्या आउँछ ।अन्य के कारणले ओठ फुट्छ भनेर सामान्यतयाः कम मात्र मानिसहरुलाई थाहा हुने गर्छ । […]
November 11, 2020 November 11, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on पाँडे जिग्री भा वुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)
पाँडे जिग्री भा वुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | पाँडे जिग्री भावुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)पाँडे जिग्री भावुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमान र श्रीमतीबीच झ गडा भएन भने त्यो सम्बन्ध के सम्बन्ध ? तर झ गडा गर्नुको अर्थ यो पक्कै होईन कि श्रीमतीलाई हात खुट्टा बाँ धेर ता तो ते ल उसको शरिरमा ख न्याईदिने । यो कस्तो सम्बन्ध ? कति निर्दयी हो त्यो मन ? के यो एउटा सामान्य मानिसले गर्न सक्ने काम हो ? […]
November 10, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २० सुत्र !
पाेखरा – नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २० सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्छ । – श्रीमतीको मूडको ख्याल राखेर ब्यवहार गर्ने – श्रीमतीका कुरा सुन्ने र सकेसम्म् […]
November 10, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on ढाड दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् छुटकारा पाउने घरेलु उपाय
कपुरको प्रयोग पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ । यदि कसैलाई दम रोगमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ । एक भाग फुराएको हिङमा एक भाग कपुर मिसिएर केराउको दाना जत्रो गोली बनाउने र दुई–दुई गोली तातो पानीसँग बिहान–बेलुका सेवन […]
विराटनगर : कोरोना भाइरस संक्रमित मोरङको केराबारी गाउँपालिका– ३ को एउटै परिवारका दाजु–भाइको छ दिनको अन्तरमा मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित ५७ वर्षीय भाइको मृत्यु भएको छ दिन बित्न नपाउँदै ५९ वर्षीय दाजुको पनि ज्यान गएको हो। संक्रमणपछि उपचाररत दाजुको मृत्यु मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा आइतबार भयो। भाइको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान […]
November 10, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on वृद्धाश्रमको भ्रमण गएकी बालिकाले वृद्धाश्रममा आफ्नी हजुरआमालाई देखेपछि
भनिन्छ एउटा तस्बिरले हजार भन्दा धेरै शब्द बोल्ने क्षमता राख्छ । यस्तै एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।यो मर्मस्पर्शी तस्बिर यति धेरै सेयर भएको छ कि सामाजियक सञ्जलामा पुरै भाइरल छ । केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा नेपालका सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको यो तस्बिरमा एक बालिका र वृद्धा रोइरहेका देखिन्छ । विश्व […]
November 10, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on “दलालि को माध्यम बाट मगाको यौ’न कर्मी आफ्नै श्रीमती परेपछि”
सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले रक्तसञ्चारलाई अझ नियन्त्रित गर्छ, जुन दीर्घकालिन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । रातो दाग बस्छ ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नाले ब्राको इलास्टिक लाग्ने ठाउँको छाला रातो हुन्छ । गर्भवती अवस्था अथवा स्तनपान गराउने महिलाले भने खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ ।**भिडियो हेर्न […]